Qaramada Midoobey oo Soo Bandhigtay Bangiyo Ku Yaala Soomaaliya oo Ay Isticmaasho Al-shabaab | Gabiley News Online
Qaramada Midoobey oo Soo Bandhigtay Bangiyo Ku Yaala Soomaaliya oo Ay Isticmaasho Al-shabaab
Wargeyska New York Times, oo soo xiganaya warbixin kasoo baxday Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey ayaa qoray in kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya ay u adeegsadeen qaar ka mid ah Bangiyada Soomaaliya inay lacago ku kala wareegsadaan.
Warbixinta ayaa waxaa soo saaray kooxda khubarada Qaramada Midoobey ee kormeerka Soomaaliya, waxaana helay New York Times ka hor inta aan si rasmi ah loo shaacin.
Warbixinta ayaa heshay caddeymo muujinaya in howl-wadeeno ka tirsan Al-Shabaab ay lacago dhigteen islamarkaana ku kala gudbiyeen akoono ka tirsan bangiga Salaam Somali Bank, oo ka mid ah bankiyada ugu weyn Soomaaliya.
Bangiga Salaam Somali Bank oo jawaab ka bixiyay warbixinta New York Times ayaa sheegay inaanay marnaba akoon u furin shaqsiyaad iyo hay’addo ay saaran yihiin cunqabatayno, islamarkaana ay qaadeen tallaabo ka dhan ah akoonada laga shakisan yahay.
Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa qiray awoodda ay Al-Shabaab u leedahay inay ka faa’iideysato hanaanka bangiyada Soomaaliya.
“Al-Shabaab waxay hanaanka bangiyada Soomaaliya u adeegsadaan inay u sahlaan inay si deg deg ah ugu kala gudbiyaan uguna qeybiyaan lacagaha tirada badan, oo ay ku jirto goobaha ayna maamulin, taasi oo meesha ka saartay halistii ku qasbi lahayd inay lacagaha u kala gudbiyaan kaash ahaan,” ayaa lagu yidhi warbixinta.
Warbixinta ayaa sidoo kale sheegtay in laba akoon oo ku xidhan Al-Shabaab ay lacago ku shubeen xarumo ganacsi iyo hay’ado alaabaha dhoofiya, lacagtaas oo gaadheysa 3 milyan oo dollar.